Tartan-Curiseedka Muuse Galaal – Garanuug
Home / Tartan / Tartan-Curiseedka Muuse Galaal
Tartan-Curiseedka Muuse Galaal
February 4, 2018	Tartan, Tartan-Curiseedka Muuse Galaal 0 19,934
Curiskii ku guuleystay kaalinta koowaad ee Tartan Curiseedka Muuse Galaal ee Hiddaha iyo Dhaqanka 2018. Hordhac Haasaawe waa eray soomaali ah oo nuxur iyo quluud badan oo dareen nafsadeed oo wanaagsan leh. Labo ujeeddo oo kala fog, balse deggenaan iyo dabacsanaan ku wada tilmaaman ayaa loo adeegsadaa. Mar waa hadal dhisan oo bilaa ...
February 3, 2018	Tartan, Tartan-Curiseedka Muuse Galaal 0 20,208
Curiskii ku guuleystay kaalinta labaad ee Tartan Curiseedka Muuse Galaal ee Hiddaha iyo Dhaqanka 2018. Umadda Soomaaliyeed ee kumanaanka sano ku noolayd cidhifka bariga Afrikaad, waxa ay lahayd hidde soo-jireen ah iyo dhaqan nolosheeda ku sargo’an. Dhaqanku waa “isu-geynta nolosha maaddiga iyo ruuxiga ah ee bulsho leedahay, soona maray isbedello taariikheed”. Halka hidduhu uu yahay ...
February 3, 2018	Tartan, Tartan-Curiseedka Muuse Galaal 0 8,749
Curiskii ku guuleystay kaalinta saddexaad ee Tartan Curiseedka Muuse Galaal ee Hiddaha iyo Dhaqanka 2018. Hordhac Sinji aw ka soo jeeda iyo sumad ma guuraana Sowraca gobeed culimadiyo niman salaadiina Sifa gaara baan leenohoo nalagu soocaaye. Intaan seben xumaadkiyo na helin saxal wax duugaaya Oo aan siyaasadu murkacan oo dhib ina saaqin Oon ...
September 4, 2017	Tartan, Tartan-Curiseedka Muuse Galaal 0 9,635
Waa Maxay? Tartankan waxaa loogu magacdaray Abwaankii weynaa ee Muuse Galaal- Alle ha u naxariisto e- (1920-1980). Waa tartan sannadle ah, waxaana lagu tartamayaa curis ku saabsan hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida. Ka qaybqaadashadu waxa ay u furan tahay dhammaan inta af Soomaaliga wax ku qorta, meel kasta oo ay joogaan. ...
“Shir looma wada uunsado”
March 30, 2017	230,453
April 1, 2017	34,581